XOG CUSUB: Sheekh Shariif oo shaaca ka qaaday in 30 sano kaddib dalka loo celinayo kaligii talisnimo! | HalQaran.com
Home Wararka Maanta XOG CUSUB: Sheekh Shariif oo shaaca ka qaaday in 30 sano kaddib...
Kismaayo (Halqaran.com) – Madaxweynihii hore ee Soomaaliya, Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa sheegay in xilligaan xaaalada dalka ay qabaan walaac farabadan, sidaas daraadeedna caleema saar kaliya aysan u tegin Magaalada Kismaayo.
Sheekh Shariif ayaa sheegay inay yeelanayaan wadatashiyo kala duwan, kaddib walwal badan ay ka qabaan sida ay wax u socdaan, hayeeshee ay hadda ku baraarugeen, isla markaana aysan aqbaleyn in sharciga laga tago.
“Runtii aniga waxaa leygu tirinayay dadka aad dowladda ugu dhow oo dadka dhaha hala daayo,maantana xaalada waad la socotiin,30 sano kadib naloo celiyo nidaam kali talis ah oo aan ogoleyn sharci iyo soomaalinimo,balse waxaa Alle mahadiis ah in aan ku wada baraarug sanahay u wada joogno taladeeda wada leenahay waana jecel nahay dowladnimada ayuu yiri”, Sheekh Shariif.
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya, ayaa sidoo kale waxaa uu sheegay in dadka Soomaaliyeed ay ku wada joogaan sharci iyo dastuur ayna wanagsan tahay in lagu wada dhaqmo, isla markaana aysan dooneyn in dowladnimada ay u dunto in sharciga lagu dhaqmi waayo.
kaddib dalka loo celinayo kaligii talisnimo!
Sheekh Shariif oo shaaca ka qaaday in 30 sano